Ambongadiny Front Idler Dulldozer mpanamboatra sy mpamatsy |Pingtai
Ny tombony amin'ny Idler
1. Ny vatan'ny kodiarana amin'ny vokatray dia vita amin'ny 35SiMn amin'ny hamafin'ny HRC55-58 ary ny halalin'ny 6-8mm, izay mahatohitra kokoa.Ny fitaovana afovoany ho an'ny vy 42Crmo dia tsy mora vaky.Mba haharitra ela kokoa ny fiainan'ny vokatra.
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny vokatra maro eny an-tsena dia 50Mn sy 45 # vy, izay tsy mahafeno ny fepetra takian'ny fanoherana ary mora vaky.
2. Ny teknolojia dia mampiasa forging sy fametrahana mazava tsara, CNC mitsangana machining famokarana.
Ny fanariana mazava tsara dia mahatonga ny vatan'ny kodiarana amin'ny hakitroky avo, tsy misy pores ary tsy mora ny mitete entona.
Ny milina mitsangana CNC dia ampiasaina ho an'ny fanaraha-maso marina kokoa ny haben'ny vokatra sy ny fahamatorana ambony kokoa.Ary tsara kokoa ny fitaovana, azo antoka ny fandidiana, avo kokoa ny fahombiazan'ny famokarana,
3. Ny sary ara-teknika ny vokatra dia 1: 1 habe tany am-boalohany.Tsy hiseho izany rehefa tsy azo apetraka ny fivilian'ny haben'ny fividianana mpanjifa.
4. Manana ekipa QC matihanina izahay, ary hanara-maso ny fitiliana vokatra, fitiliana vokatra semi-vita sy vita ary hamokatra tatitra.
Ny vokatra rehetra dia manana ny nomeraon-dry zareo manokana.Rehefa ny mpanjifa fanehoan-kevitra vokatra olana, dia ho hitantsika ny mifanaraka QC fitsapana fanambarana araka ny ID isa ny vokatra, mahita ny olana ary tonga amin'ny vahaolana.
Inona no atao hoe IDLER?
Ny asan'ny sy ny idler dia ny fitarihana ireo rohy mankany amin'ny lalana mankany amin'ny fandehanana milamina sy ny fisorohana ny fivilian-toerana.Mitondra lanja ihany koa ny idlers ary noho izany dia mampitombo ny rohin'ny lalana izay mampihena ny tsindry amin'ny tany. lafiny roa.Ny kely kokoa ny elanelana misy eo amin'ny idler sy ny track roller, no tsara kokoa ny orientation.
Ny fampahalalana momba ny IDLER
Famaritana: CAT D11 FRONT IDLER DULLDOZER MINING OPERATION
Fahaizana famatsiana: 1000 PCS / volana
teknika: Forging/precision casting
hamafin'ny: HRC55-58, halaliny 6-8mm
teo aloha: Carrier Roller Mining Operation
Manaraka: Sprocket Segment forged
Exkavator Undercarriage Wear, Ny kojakojan'ny siny excavator, Excavator bucket fanapahana sisiny, High Strength Bolt, Rollers Track fingotra, Mitondra Track Roller,